Buy Lase Sa Luay (ဆံပင်​​ပေါင်းတင်​​ဆေး) in ရန်ကုန် (5,500 Ks) on ipivi
Lase Sa Luay (ဆံပင်​​ပေါင်းတင်​​ဆေး)
ထိုင်းမှာအရမ်းကိုရေပန်းစားပြီး လူကြိုက်အများဆုံး အရောင်းရဆုံးစာရင်းမှာ No.1နေရာယူထားတဲ့ ပေါင်းဆေးလေး
ပါရှင်။ တစ်ကြိမ်သုံးရုံနဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝရစေပါတယ်နော်။
သူ့ရဲ့ effect တွေကတော့
📲 09 4243 91 755(viber)(chatbox) မှ စာပို့၍
** အမည်. ဖုန်းနံပါတ်. လိပ်စာ. ပစ္စည်းအမျိုးအစား
** လက္ကားမှာယူလိုသူများ(Viber)မှစာပို့ဆက်​သွယ်​၍​မေးမြန်း မှာယူနိုင်​ပါတယ်​ရှင်​။
အမည်:Lase Sa Luay (ဆံပင်​​ပေါင်းတင်​​ဆေး)